Maalinta: Meey 15, 2020
Iyada oo la raacayo baaxadda tallaabooyinka laga qaadayo cudurka 'coronavirus' (Covid-19), bandoowga waxaa la hirgalin doonaa 16-19 Meey 2020, sida ku xusan go'aanka Ankara Governorship-ka ee Golaha Caafimaadka Dadweynaha ee taariikhaysan, oo ku taariikhaysan 13.05.2020 iyo lambar 2020/34. [More ...]
Sannad-guuradii 19-aad ee 101-kii Maajo, safarkii Atatkrk ee Istanbul ku tegey Samsun oo ay la wadaageen kooxda Bandırma Ferry ayaa lagu soo nooleeyey internetka. Bandırma Ferry, oo ka tagi doonta Istanbul 16ka Meey munaasabada "Dariiqa Qarniga", Talaadada, 19ka Meey. [More ...]
Shaqo ayaa socda dhismaha qaybinta, oo ah lugtii ugu dambeysay ee Terminalka Altınordu Intercity Bus Terminal, oo ay dhistay Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu ee ku taal degmada Altınordu, oo ku taal 3 177 m2 midigta dhinaceeda wadada giraan. Wadarta guud ee garoonka 22.000 [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri waxay jabinaysaa tagaasida ganacsiga iyo sidoo kale gaadiidleyda dadweynaha si loogu helo gaadiid caafimaad qaba. Faafinta ku dhawaad ​​800 taksiyada ee Kayseri waxaa fuliya kooxaha Dawladda Hoose ee Magaalada. Kayseri [More ...]
Iyaga oo la shaqeynaya maalin iyo habeenba tareenka koronto ee guriga, TÜVASAŞ wuxuu kaliya 29 usbuuc ka maqanyahay May 2 iyadoo la siinayo Wasiirka Mustafa Varank. Tareenka korontada qaranka waa a [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya waxay jabinaysaa tagaasida ganacsiga iyo ganaaxyada qadka iyada oo laga duulayo talaabooyinka ay qaadayaan ee ku saabsan nooca dillaaca cusub ee coronavirus (Kovid-19). Kovid-19 si joogto ah loogu raaco basaska iyo taraamyada laga soo bilaabo maalinta ugu horreysa ee cudurka dillaacay [More ...]
Gaadiidka Magaalada Kocaeli ee Magaalada Kocaeli wuxuu siiyaa raaxo, nadaafad iyo waqti gaadiid adeeg oo kumanaan rakaab ah maalin walba basaska. Dawlada Hoose ee Magaaladu waa bas 1 milyan kiilomitir 2 bil gudaheed inta lagu guda jiro dagaalka lagula jiro coronavirus [More ...]
Bandoowga, oo lagu dhawaaqay waqtiyada u dhaxeeysa faafitaanka Covid-19, waxaa sidoo kale lagu dabaqi doonaa 16-ka ilaa 19-ka May. In kasta oo dadka daggan Istanbul ay guryahooda joogeen ka dib bandoowgu wuu xaddiday 4 maalmood, unugyo badan oo ka mid ah IMM [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay qaadatay go’aan muhiim ah iyadoo la raacayo talo soo jeedinta Guddiga Sayniska ee Wasaaradda Caafimaadka. Si aan loo xoojin faafitaanka cudurka coronavirus, oo leh heer xawli ku gudbinta tartiib tartiib ah, basaska muddo dheer lama shidmi doono. Magaalaga Izmir [More ...]
Dunida ayaa riixday badhanka si ay dib ugu wareejiso giraangiraha. Turkiga ayaa ku soo bandhigi doona hannaan cusub habkaan: saldhigyada wax soo saarka go'doonsan. Saldhigga koowaad ee heerarka 'MÜSİAD' waxaa laga furi doonaa Tekirda Te 15ka Juun. Albaabada salka [More ...]
Wasaaradda Kaabayaasha Yukreeniyaan waxay la wadaageen faahfaahinta qaar ku saabsan qorshaha saddexda heer ah ee ay u soo saareen dib-u-bilaabista gaadiidkii iyo rakaabkii rakaabka. "Gaadiidka ayaa ka bixi doona tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo," ayuu yiri Vladislav Krikliy. Si loo go'aamiyo taariikhaha qorshaysan ee marxaladaha dhamaadka usbuuca, [More ...]
HERIKKS, oo ay soo saartay ASELSAN, wuxuu isku daraa macluumaadka laga helay radarska hawada wuxuuna abuuraa muuqaal cirfiir ah oo waqtiga dhabta ah wuxuuna siiyaa qoondeynta bartilmaameedka ugu habboon ee hub-ka-dhigista Qiimaynta Khatarta iyo Hubka Qalabka. Nidaam, [More ...]
Xayeysiin ayaa waxaa daabacay Agaasimaha Guud ee Dhirta. Baaqa lagu daabacay cinwaanka "Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta, Agaasinka Guud ee Dhirta, 2020 ayaa qandaraas la galey shaqaale qorista", ugu yaraan murashaxiinta ka qalin jabisay dugsiga sare. [More ...]
Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. İsmail Demir wuxuu baaray aaladda MR ee maxalliga ah ee ugu horreysa oo tusmooyinkeeda ay soo diyaariyeen ASELSAN iyo Bilkent UMRAM. Markii bayaan laga soo saaray ku-biirintii wershadaha difaaca ee qaybta caafimaadka, ayuu Demir yidhi, “ASELSAN [More ...]
"Ujeedada Daaweynta Daaweynta Hyperimmunserum ee ka dhanka ah COVID-19", oo ay taageerto Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta, iyadoo lala kaashanayo Agaasinka Xarunta Cilmi-baarista Xakameynta Caafimaadka ee Etlik (Etlik VKMAEM) iyo Agaasimaha Guud ee Caafimaadka Dadweynaha ee Wasaaradda Caafimaadka. [More ...]
Wasiirka Wershadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa tilmaamay inay ku sii wadi doonaan wax soo saarka duruufaha iyo xaaladaha oo dhan wuxuuna yidhi, "Waxaan hirgalin doonnaa siyaasado kordhin doona awooddeena tartan xitaa xitaa more. Warshadeena si qarsoodi ah ayay ku sii wadaysaa. ayaa yidhi. [More ...]
Ururada Dembiyada ee abaabulan Howlgal Nadaafadeed!
Hawlaha ay qabteen Agaasimaha Guud ee Amniga, Waaxda KOM; dhawaanahan waxay wadaagaan warbaahinta bulshada laba koox, gaar ahaan door bidida iyo ka soo horjeedka tiro ururo dambiile abaabulan oo qaran. [More ...]
Kooxaha taageerada bulshada ee Vefa, oo lagu sameeyay isuduwidda maamulidda iyo maamullada degmooyinka, ayaa muujiyay daacadnimo weyn 53 maalmood. Kooxaha aaminaad darradu waxay gaarayaan 53 qoys 5.674.281 maalmood, 65 sano iyo wixii ka weyn iyo kuwa qaba cudur daba-dheeraada [More ...]
Dhuxul Waxaa Lagu Iibsan Doonaa Sandb steel steel Buundooyinka Epoxy Rinjiga Shaqada Gawaarida gawaarida ayaa la qaadi doonaa
BILAASH AMMAANKA PARAM oo ay soo saartay TURK Elektronik Para wuxuu baabi'inayaa khataraha ay ka mid yihiin khayaanada iyo xatooyada iibsashada iyo iibinta gawaarida gacan labaadka ah wuxuuna ka hortagaa in khasaaro dhacdo. Nidaam lacag bixin oo deg deg ah oo aamin ah [More ...]
Markii la furay jidadka tareenka ee Liverpool iyo Manchester bishii Sebtember 1830, ayaa la bilaabay adeegyo tareeno uumi ah. Ka hor inta aan la abuurin tareenka uumiga ah, tareenada badankood waxay ku shaqeeyaan xoog xoolo waxaana loo adeegsaday qaadista dhuxusha iyo xamuulka la midka ah masaafo gaaban. Liverpool iyo Man United midba midka kale [More ...]
Waxaa la dhisay sanadkii 1909 (Hijri 1327), idaacadani waxay ku taalaa 20 Km koonfur-bari Sehl El-Matran iyo 15 Km u jirta saldhigga Sehl El-Matran. Idaacaddani waxay lamid tahay muuqaallada xarumaha kale [More ...]
Maanta oo Taariikh ah: 15 Meey 1923 Railways Tareenka ee Zurich
Maanta oo taarikhdu tahay 15ka May 1891 khadka Lefke-Bilecik (36 km) ayaa la furay. 125 kun oo farans ayaa lagu isticmaalay halkii kiiloomitir. Meey 15, 1923 Qaar ka mid saamiyada Bangiga Tareenka ee Zurich wuxuu ka iibsaday England. Bangigan; [More ...]